ब्रोकर महोदय ! अर्काको सम्पतिलाई बन्धक बनाउनु डकैती नभए के त ? (रोहन शर्माको ब्लग)
"आफ्नै दुकान, आफ्नै मर्जीले बन्द गर्‍या जस्तो पो गर्नुभो त महोदय ! अर्काको सम्पत्तीलाई बन्धक बनाउनु डकैती नभए के त ?"
साधारणतया "दलाल" शब्दलाई एकदमै नकारात्मक दृष्टिकोण हेरिने गरिएता पनि "सेयर दलाल" शब्दलाई चाँही समाजमा सम्मानजनक हिसाबले हेरिन्छ। यसका कारणहरुमा सेयर बजारमा उनिहरुको योगदान, ब्रोकर लाईसेन्सको भ्यालुका साथै ब्रोकरको योग्यता, क्षमता जस्ता कुराहरु रहेका छन्।
हाल बजारमा कार्यरत ब्रोकरहरु धेरै भन्दा धेरै स्नातकोत्तर अध्यन गरेका छन्,लेक्चरर प्रोफेसरको रुपमा बिभिन्न शैक्षिक सँस्थामा आवद्द रहेका छन् , कम्तिमा पनि स्नातक पास गरेका बौद्दिक बर्गको उपाधी पाएका यिनै ब्रोकरले हिजो भने सेयर बजारको ईतिहासमा कालो अक्षरले लेखिएको एउटा पानानै दर्ता गरे!